China Electric pole Kugadzira uye Fekitori | XY Shongwe
Nzvimbo yeKutanga: Sichuan, China
Hupenyu hwese: Vanopfuura makumi matatu Ehe
● Voltage: 35kV
● Chinyorwa: Q255B / Q355B / Q420
● Kupisa kwakakurisa
Isu tinobata hunyanzvi mukugadzirwa uye kunyepa kweiyo yekufambisa mutsara shongwe iyo iri kubudirira mukushandira zvinodikanwa zvemagetsi maindasitiri. Iyi tambo dzekuparadzira tambo dzakagadzirwa sekuenderana nezvinodiwa zvevatengi vedu uye zvinoitwa kuomarara kwemhando yekuongorora kuona zero kukanganisa uye kuita kwakanyanya.
● 8000 Sq. Mamita eWorkshop neCranes.
● Yadhi Yakaringana Yekuchengetedza.
● maInjiniya ane ruzivo uye Vashandi Vanokodzera.
● Yakakwira Mutengo Yekuchengetedza Mutengo.
● Kuburitsa Zvigadzirwa Zvemhando yepamusoro paKukwikwidza Mitengo Kuona.
● Kununurwa Panguva Yakafanira.
Voltage giredhi 33 / 35kV
Kureba kwezita 9-36m
Nhamba dze bundle conductor 1-4
Yakakwira-yakaderera magetsi pane imwechete shongwe kukwira 33 / 35kV pasi 10kV
Pashure: Kufukidza shongwe
Zvadaro: 33kV kaviri redunhu hutachiwana mutsetse shongwe
Simba reMagetsi Pole